पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणः न्यूज २४ टेलिभिजनको ल्यान्डलाइनबाट अस्मितासँग बारम्वार फोन - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले जागिर छोडेपछि पनि न्यूज २४ को कार्यालयबाट शंकाको घेरामा रहेकी रुकु भनेर चिनिने अस्मिता कार्कीसँग बारम्वार टेलिफोन सम्वाद भएको तथ्य खुलेको छ । पुडासैनीकी गर्ल फ्रेण्डको उपमा पाएकी अस्मितासँग न्यूज २४ को लेण्ड नम्वरबाट कसले बारम्वार फोन गरयो ? त्यो एकिन नभएपनि टेलिभिजनको कार्यालयबाट बारम्वार फोन भएको कल डिटेलबाट रहस्य खुलेको छ । अस्मितालाई प्रयोग गरी आफुलाई सिधाकुरा जनतासँग कार्यक्रममा युवराज कँडेलले फसाउँन खोजेको पुनासैनीले डिभियो रेकर्डमा पनि चर्चा गरेका छन् ।
तर सञ्चारकर्मी रवी लामिछानेको मोवाइलबाट अस्मिताको कुनै पनि कुराकानी भएको छैन । टेलिभिजनको ल्याण्डलाइनबाट भने पुडासैनीले छोडेपछि बारम्वार टेलिफोन भएको छ । -शालिकरामले न्युज २४ छोडिसकेको अवस्थामा समेत यसरी सम्पर्क हुँदा बढीमा ५ मिनेटसम्म कुराकानी गरेको भेटिएको छ’, अनुसन्धान खट्टिएका एक प्रहरी अधिकृतले भने, को सँग कुरा भयो त्यो भने हामी खोजिरहेका छौ । पुडासैनीले ‘सिधाकुरा जनतासँग’ छोडेर माउन्टेन टेलिभिजन गइसकेपछि पटक–पटक सम्पर्क देखिएको विषयलाई अनुसन्धान अधिकारीहरुले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन्।
उता रवी लामिछानेलले सरकारी वकिलको रोहवरमा प्रहरीलाई बयान दिएका छन् । बयानमा रिकु भनिने अस्मिलासँग आफ्नो चिनजान नभएको बताएका छन् भने प्रहरीले सोधेका अधिकाँस प्रश्नको इन्कारी जवाफ दिएका छन् । रविको बयान सकिएपछि प्रहरीले आइतवार मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुरयाउने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौ । नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्यका रुपमा ठहरिएको दक्षिण कोरियामा एक दशकको अवधिमा झण्डै ६० हजार […]
कांग्रेसमा गच्छदारको हैसियत पौडेलबराबर !
काठमाडौ । कांग्रेसमा विजयकुमार गच्छदारलाई रामचन्द्र पौडेलबराबरको हैसियत दिने तयारी सभापति शेरबहादुर देउवाको […]
सिड्नी । सिड्नीको एज केयरमा एक रेजिडेण्ट वृद्धलाई कुटपिट गरेको आरोपमा एक नेपाली पक्राउ परेका छन् । सेभेन […]
सिंहदरबार घेराउमा प्रहरीले अवरोध गरेकोमा संघीय गठवन्धनको आपत्ति
जेठ २ । काठमाडौं, सिंहदरवार घेराउ कार्यक्रममा सहभागी हुन आउन लागेका आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई प्रहरीले जबरजस्ति […]
कृषि विकास बैंकले चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पु¥याउने
काठमाडौँ, नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर रहेको कृषि विकास बैंकले २०७४ असारमसान्त सम्ममा चुक्तापुँजी रु आठ […]